Indlu ye- "Al Pino" - I-Airbnb
Indlu ye- "Al Pino"
Gornate Olona, Lombardia, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Valentina
U-Valentina Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 15.
Ikhaya lakho emaphandleni!
Ifulethi elisanda kulungiswa cishe elingamamitha-skwele angama-50 elibheke ingadi enhle endaweni eluhlaza nethule kakhulu enamagquma. Ilungele uhambo lwebhizinisi kanye nezokuvakasha. Isikhumulo sezindiza saseMalpensa siyimizuzu engama-20 kuphela ngemoto.
Ifulethi, eliseduze nomgwaqo omkhulu, lisendaweni ephansi yendlu kusukela ngasekupheleni kwawo-1800, linokubukwa okuhle kwengadi yezivakashi kanye namanye amayunithi amabili, ahlala amalungu athile omndeni wami.
Ifulethi linendawo yokudlela, ikhishi elizimele, igumbi lokugezela elikhulu, negumbi elikhulu lokulala elinombhede ophindwe kabili kanye nosofa ongashintshwa kalula ube umbhede wesithathu.
Ikhishi lihlome ngokuphelele, kunikezwe amathawula namashidi.
Ilungele ukuhamba kwebhizinisi nezokuvakasha.
ubusuku obungu-7 e- Gornate Olona
Izinto eziheha izivakashi ezisemqoka kule ndawo:
- I-Monastery yaseTorba (FAI) - imizuzu emi-2 ngemoto
- I-Castelseprio Archaeological Park - isanda kumenyezelwa njengeNdawo Yamagugu Omhlaba yi-UNESCO - imizuzu emi-5 ngemoto
- UCastiglione Olona - idolobhana laseTuscan eLombardy - imizuzu emi-5 ngemoto
- ILake Maggiore - imizuzu eyi-15 ngemoto
- I-Varese Lake - imizuzu eyi-10 ngemoto
- ILake Como - imizuzu engama-20 ngemoto
Umuntu ovela emndenini wami uzokwamukela futhi akunike lonke ulwazi ukuze wenze ukuhlala kwakho kujabule.
UValentina Ungumbungazi ovelele